सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई खुल्ला पत्र, ‘दाई’ तपाईको बानी उस्तै रहेछ – Medianp
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई खुल्ला पत्र, ‘दाई’ तपाईको बानी उस्तै रहेछ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१६:४४0
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई म दाई भन्थेँ काठमाडौंमा रहेर पत्रकारिता गर्दा र अहिले पनि दाई नै भन्छु । त्यसैले मैले माथि नै दाई भनेर सम्बोधन गरेँ । भलै तपाईसँग प्रत्येक्ष भेट नभएको तीन वर्ष हुन लाग्यो । मलाई संकटको बेलामा आफ्नो पत्रिकामा रोजगारी दिएर निकै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ । शम्भु दाईको दृष्टि पत्रिकामा पनि काम गर्थेँ । त्यसले खान पुग्थेन । त्यसैले म पत्रकारिताबाट पलायन हुने सोच बनाउँदै गर्दा तपाईले आफ्नो पत्रिकामा काम दिनु भयो र मेरो पत्रकारिता इतिहासमा थोरै भए पनि योगदान पु¥याउनु भएको छ । जसले मलाई पत्रकारितामै लागि रहन मद्दत पनि गरेको थियो त्यतिबेला ।
पछि तपाईको पत्रिका छाडेर देवप्रकाश दाईको घटना र विचार पत्रिकामा काम गर्न पुगेँ । घटना र विचार पत्रिकामा काम सुरु गरेलगतै पत्रकारिताको नाममा दलीय राजनीति गरिरहेका र आफुलाई प्रेस चैतारीको मसिहा ठान्नेहरुले ‘जो अहिले पनि चौतारीकै कुनै कुनातिरै छन्’ रामहरि काँग्रेसमा गयो भनेर प्रचार गर्थे । पानी बाराबार जस्तै गर्थे, कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाउँदैनथे । पछि बोधराज त्रिपाठीको सौर्य पत्रिकामा काम सुरु गरेपछि फेरी तीनै मसिहाहरु अब रामहरि एमालेमै फर्क्यो भन्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नतिर लाग्थे । बाटेको बाबियो जस्तै गरी । यस्ता व्यक्तिहरु अहिले प्रेस चैतारी नामक संस्थामै छन्, केही रिटायर्ड भए क्यारे ।
गोकुल दाईका समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा उभिएकाहरुलाई म सलाम गर्छु। हो, एकलाई पर्दा अर्को उभिनुपर्छ । तर, यहाँ नियतमा निकै खोट देखिन्छ । तपाईको जयजयकारले गोकुल बास्कोटा झन दलदलमा फस्दै छन् । उनलाई नाङ्गेझार पारेर बाटोमा दौडाइ रहनुभएको छ । त्यो तपाईहरुले सोच्नु भएन भन्ने लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रेस चैतारी र एमाले समर्थक कार्यकर्ताहरु लागेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी त चौतारीका ‘पत्रकार’ज्युहरु लाग्नु भएको छ । ‘…लाई चलायो गन्ध’ भने जस्तो गर्नु भयो । तील जत्रो विषलाई सुमेरु पर्वत बनाउनु भयो । तपाईहरु नै होइन साझा सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अन्ठसन्ठ प्रश्न गर्नेको समर्थनमा फेसबुक पेज भर्ने । खुसी साटासाट गर्ने । त्यो भुल्नु भयो ? अहिले सञ्चारमन्त्रीमाथि नियमसंग राखिएको प्रश्नलाई अनावश्यक प्रश्न गरियो । अघिपछि हल्कारुपमा प्रस्तुत हुने ब्यक्ति पुरा डकुमेन्टसहित उपस्थित भएर प्रश्न ग¥यो, अख्तियार गर्ने प्रश्न ग¥यो, आफ्नो दायारा बिर्स्यो आदि आदि भनेर पत्रु कमेन्ट गर्न रति पनि लाज लागेन तपाईहरुलाई ? तपाईहरुको यस्तो पोष्ट देख्दा आफैलाई दुःख लागेर आउँछ । कृपया विषयको वास्तविकताभित्र पुगेर सही र लगत छुट्टाएर त लेख्नुस । यदि सक्नुहुन्न भने चुप लागेर बस्नुस् । अनावश्यक रुपमा विषयलाई लम्ब्याउने काम नगर्दा राम्रो । आफ्नो नाक काटेर अरुको … टाल्ने काम नगर्दा राम्रो भन्ने लाग्छ ।
ए बाबा ! यहाँ त कार्यक्रमनै बन्द गरिएको छ । मानौ भोलि समयले कोल्टो फेरेर कमल थापा वा अरु कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र, त्यो सरकारको सञ्चार मन्त्रीले यसैगरी कार्यक्रम बन्द गरिदियो भन्ने तपाई के गर्नु हुन्छ ? मलाई लाग्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो भन्दै सबै भन्दा पहिले सडकमा तपाईहरु नै पुग्नुहुन्छ । व्यक्ति नै पिच्छे विज्ञप्ति आउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले जसरी समर्थनमा लेख्नुभएको छ, पछि विरोधमा आउँछन्, यो देखिएकै कुरा हो । नपत्याए आफ्नै फेसबुक पेज पल्टाएर हेर्नुस । पुराना विज्ञप्तिहरु हेर्नुस् । अनि विरोध गर्नुहुने महान व्यक्तित्वज्यूहरु तपाईहरुलाई अरुको विरोध नगरी खाएको पच्दैन ? खाएको पचाउन विरोधनै गर्नु पर्छ है । लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन गर्न पाइन्छ । यो छुट छ । त्यसको पनि कुनै सीमा होला नि होइन र ? तपाईहरु आफ्नो मानो खाएर किन अरुको विरोधमा लाग्नु हुन्छ ?